Khabiirka Kala Duwan: Sidaad u Abuuri lahayd Sawirrada Gacanta Leh?
Miyuu sameeyaa fekerka fiidiyowga dhab ahaantii ka caawiya mid ka mid ah taageerayaasha badan? Ma runbaa in ay sidoo kale ku duuban yihiin waxyaabo kale oo badan, retweets, oo ka hadlaya? Dabcan, waxay sameeyaan. Waxaa jira nambarro xaqiiq ah oo ku saabsan sidan, sidaa daraadeed sawirada fiidiyowga way shaqeeyaan. Waxaa jira xayiraad: inkastoo sawiradu ay tahay mid sharaf leh
Frank Abagnale, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semef , wuxuu halkan ku qeexayaa talooyin ku saabsan abuurista sawirro sawiro leh oo ku yaala Twitter.
Halkan waa afar dhibcood oo muujinaya saameynta sawirada tweet.
BufferApp ayaa koontada Twitter-kooda ku soo bandhigay wakhti wakhti Nofeembar, 2013. Waxa ay ka muuqdaan waxay muujiyeen qaab la yaqaan - curso de fotografia on line gratuito nikon. Tweets oo leh pics ayaa helay 18% rikoodhyo dheeraad ah iyo 150% retweets ka badan kuwa aan lahayn pics
Twitter ayaa shaaca ka qaaday waxyaabihii ka qayb galay retweets oo badanaa oo maleynaya in qodobka uu ku fadhiyo liiska ugu sarreeya liiska? Dabcan, sida aad filayso, waxay ahayd sawirro. Sawirada Tweets oo leh sawirro 35%, videos (28%), qiimaha (19%), kuwa haysta lambar (17%) halka kuwa qaba hashtags ay kor u kaceen 16%. Ogsoonow in aad sawirro iyo sawirro qoton karto oo rukumo ah aad u badan karto
Blog Sotrender ayaa falanqeeyay 500 ugu dambeeyay soo iibsiga on Twitter. Waxay xoogga saareen sida loo ogaado sida pic.twitter.com, canabkiinna, Instagram, facebook iyo twitpic.com waxay leeyihiin saameyn. Xayawaanka iyo twitpic.com waxay leeyihiin saameyn yar inta ay kuwan la socdaan sawiro iyo pic.twitter.com waxay lahaayeen 141% retweets more. Kuwa isticmaala Facebook / Instagram links, dhanka kale, waxay heleen 122% iyo 89% retweets kala duwan..
Markii Dan Zarella uu wakhti u qabtay inuu falanqeeyo 400k tweets (ayaa loo doortay) si loo qiimeeyo saameynta muuqaalka Twitter ee retweets. Gabagabaddiisa ka dib baadhitaanka? Tweets oo leh sawiro ayaa waxay leeyihiin 95% fursad ah in ay retweeted
Sida laga soo xigtay khubaro, waxaa loo baahan yahay in la ogaado cabbirka ugu fiican ee farshaxan tweet. On desktop ah, dhammaan sawirada ee jadwalka waa 506 iyo 253 pxs (pixels). Saamaynta muuqaalku waa 2: 1. Haddii sawirku uusan ku dhicin inta u dhaxaysa (waxay sheegaysaa in ay sidan kor ku xusan tahay), ka dibna waa la jarjarey. Si kastaba ha ahaatee, markasta qof kasta oo sawirka ku dhegaya, ka dibna wuxuu u arkaa wax walba.
Abuuritaanka sawirrada-habboon ee sawirrada tweets
1. Watermark iyaga - tani, adeegso Pablo (qalab bilaash ah). Ku bilaw inaad abuurto sawir qurux badan oo ah xigasho, su'aal ama si rasmi ah. Dhamaan sawir muuqaal oo ilaah ah
2. La wadaag sawirrada Instagram iyo Facebook. Haddii taageerayaashaada kuxiran yihiin goobahan, markaa koobabaadu waxay sidoo kale iyaga jeclaan doonaan.
3. Samee sawirro sawir leh. Waxaad isticmaali kartaa seddex ama afar sawir si aad u sheegtid sheeko nooc ka mid ah. Marwalba waxay ka shaqeysaa wax yaabab.
4. Tag. Tag. Tag. Sida dhammaan shabakadaha warbaahinta bulshada, Twitter ayaa sidoo kale kuu ogolaanaya inaad u tagto dadka kale isticmaala si ay uga faa'iidaystaan ​​tan
5. Isku day Raadin GIFs GIFs waxay noqon kartaa habka ugu qaalisan ee lagu daro waxyaabaha gaarka ah ee waqtigaaga. Ogsoonow in GIF-yada ayan si toos ah u ciyaarin. Isticmaalku waa inuu riixaa badhanka ciyaarta marka hore.